शुक्रवार सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कस्तो छ आजको बजार भाउ ? – bisalchautari.com
शुक्रवार सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कस्तो छ आजको बजार भाउ ?
- ५ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०५:२४ मा प्रकाशित
see voltaren retard 100mg http://ww2.prescribewellness.com/onlinerx/cost-crestor-5mg/30/ go appendix essay how to include am looking for someone to write my research papers om prakash essay air force https://projectathena.org/grandmedicine/mejor-precio-en-comprar-viagra/11/ university of miami creative writing major go site follow url best dissertation proposal editor for hire for university https://smartfin.org/science/dure-deffet-du-sildenafil/12/ source link customer relationship management research paper buy prescription drugs uk calligraphy essay source site source site http://jeromechamber.com/event/bibliographic-essay-format/23/ breast prosthesis manufacturers china essayer mac os x login discover test tadacip 20 university application personal statement go cost for resume writing service click here introduction to hypothesis testing passion rx viagra thesis abstract parts विशाल चौतारी समाचार
काठमाडौं , २०७७ मंसिर ५ शुक्रवार । शुक्रवार सुन र चाँदी दुबैको मूल्य घटेको छ । शुक्रवार छापावाल सुन प्रतितोला ९४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
त्यस्तै तेजावी सुन पनि प्रतितोला ९३ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बिहीवारको तुलनामा छापावाल सुन प्रतितोला ४ सय रुपैयाँले घटेको छ । एकदिन अगाडी छापावाल सुन प्रतितोला ९४ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
बिहीवारको तुलनामा चाँदी पनि प्रतितोला ५ रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १२ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।